असोज १५, काठमाडौं । यो साता लगातार तीन दिन घटेको बजार अन्तिम कारोबार दिन भने बढेको छ । बुधवार ३.१९ अंक घटेर १ हजार ५५० दशमलव ४३ विन्दुमा बन्द भएको बजार बिहीवार १ हजार ५५३ दशमलव ९६ विन्दुदेखि खुलेको थियो ।
यो दिन बजार १ हजार ५७२ दशमलव ९४ विन्दुसम्म पुगेको थियो । दोहोरो अंकले बढेको बिहीवारको बजारमा जलविद्युत् समुहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव ८८ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै यो दिन म्यचुअल फण्डको परिसूचक पनि शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत घटेको छ ।
बिहीवारको बजारबाट निर्जीवन बीमा र विकास बैंकका लगानीकर्ताहरुले बढी कमाएका छन् । यो दिन निर्जीवन बीमा समुहको परिसूचक सर्वाधिक ४ दशमलव ३१ प्रतिशत बढेको हो भने विकास बैंक समुहको पनि ३ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढेको हो ।
त्यस्तै बैंकिङ् समुहको १ दशमलव ५२ प्रतिशत, व्यापारिक समुहको १ दशमलव ८८ प्रतिशत, होटलको शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत, वित्तको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समुहको १ दशमलव ६७ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव २९ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत र जीवन बीमाको १ दशमलव ६६ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
बिहीवार कारोबार रकम पनि करीब रू. ३ अर्ब नजिक रहेको छ । यस दिन १९३ ओटा कम्पनीको ४७ हजार ३२ पटकको व्यापारमा रू. २ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ८ हजार बराबरको ९९ लाख ३० हजार ८३० कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
बिहीवार कुल कारोबारमा सर्वाधिक हिस्सा बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले ओगटेको छ । उक्त कम्पनीको रू. १४ करोड ७६ लाख ५६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
बिहीवार उक्त कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट १६ प्रतिशत लाभांश दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । लाभांश सार्वजनिक भएको दिन उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य पनि ९ दशमलव ३० प्रतिशत् अर्थात प्रतिकित्ता रू. २४ ले बढेर रू. २८२ कायम भएको छ ।
यो दिन सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । बिहीवार उक्त कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रू. १५ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १६५ कायम भएको हो ।
दोहोरो अंकले बजार बढेको दिन जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यो दिन शेयरमूल्य घट्ने १० ओटा कम्पनीमा जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् ।
माउण्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडको शेयरमूल्य यो दिन सर्वाधिक ९ दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै पञ्चकन्यामाई हाइड्रो र हिमालय उर्जा विकास कम्पनीको शेयरमूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।